१ बलमा २२ रन लक्ष्य पाएको विश्वकप क्रिकेटको यस्ता रोचक घटना !::Leading Nepal News
१ बलमा २२ रन लक्ष्य पाएको विश्वकप क्रिकेटको यस्ता रोचक घटना !
जेठ ०४ , काठमाडौ । आईसीसी विश्वकप क्रिकेटका लागि सहभागी हुने १० टिमले अहिले तयारी गरिरहेका छन् । विश्वकप सबैका लागि चासोको विषय पनि हो । खेलमा विवाद नहुने भन्ने कुरै आउँदैन् । अन्य खेलको तुलनामा क्रिकेट अनुशासित खेल पनि मानिन्छ । तर यो खेल पनि विवादरहित भने छैन् । विश्वकप क्रिकेटमा भएका विर्सन नसकिने विवादहरुबारे चर्चा गरौं
२००३ मा विश्वकपअघि भएको डोपिङ टेस्टमा प्रतिबन्धित पदार्थ प्रयोग गरेको अभियोगमा अस्ट्रेलियाका शेन वार्नले प्रतियोगिता छाड्नु परेको थियो ।त्यसपछि उनी दक्षिण अफ्रिकाबाट घर फर्किए । प्रतियोगिता छाड्नु परेका वार्नलाई १ वर्षको प्रतिबन्ध पनि लागेको थियो । त्यतिबेला शेन वार्न उम्दा फर्ममा थिए ।उनको वर्हिगमन अस्ट्रेलियाका लागि प्रतियोगिताअघि ठूलो झड्का लाग्यो । तर रिकी पोन्टिङको कप्तानीमा रहेको अस्ट्रेलियाले सम्हालिएर प्रदर्शन मात्रै गरेन अन्ततः ट्रफी नै कव्जा गरेको थियो । २००७ को विश्वकपमा आयरल्याण्डसँग पाकिस्तान पराजित भयो । पाकिस्तान ३ विकेटले पराजित भएको थियो । पहिला ब्याटिङ गरेको पाकिस्तान १३२ रनमा समेटिएको थियो भने डिएल मेथड अनुसार आयरल्याण्ड ३ विकेटले विजयी भएपछि पाकिस्तान प्रतियोगितबाट बाहिर भयो । त्यस खेलपछि पाकिस्तानका कोच बब बुल्मर बसेको होटेलमा मृत भेटिए । त्यस घटनाको जाँच भए पनि मृत्यु प्राकृतिक कारणले भएको पुष्टि भएको थियो ।
लिबरेशन टाइगर्स अफ तमिल इलम (एलटीटीई)ले कोलम्बोको सेन्ट्रल बैंकमा बम प्रहार गरेपछि सुरक्षाको कारण देखाउँदै वेस्टइण्डिज र अस्ट्रेलिया श्रीलंकामा खेल्न जान नमानेपछि त्यसको फाइदा घरेलु टोली श्रीलंकालाई भयो ।उ समूह चरणको शीर्ष स्थानमा रहन सफल भयो र फाइनलमा अस्ट्रेलियालाई पराजित गर्दै विश्वकपको उपाधि नै जितेको थियो । जुन श्रीलंकाले जितेको पहिलो विश्वकप थियो । जिम्बाबेमा रोबर्ट मुगाबेको शासनले लोकतन्त्रको हत्या भएको भन्दै त्यसको विरोधमा खेलाडीहरु उत्रिए । त्यसको विरोधमा एन्डी फ्लावर र हेनरी ओलंगाले पत्रकार सम्मेलनमा प्रतियोगितामा हातमा कालो पट्टि बाँधेर खेल्ने घोषणा गरे । त्यस घटनापछि उनीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट साथ पाए पनि विश्वकप भने छाड्नु परेको थियो ।
१९९२ मा विश्वकपको सेमिफाइनलमा दक्षिण अफ्रिका र इंग्ल्याण्ड भिडेका थिए । दक्षिण अफ्रिकाले १३ बलमा २२ रन बनाउन बाँकी रहेकाबेला पानी पर्न सुरु भयो । सबैले यो खेलमा अफ्रिका फाइनलमा पुग्ने अपेक्षा गरेका थिए । तर पानीले प्रभावित गरेपछि नयाँ लक्ष्य सेट हुँदा ७ बलमा २२ रन दिइयो । पानीले फेरि प्रभावित गरेपछि अन्तिम लक्ष्य १ बलमा २२ रन थियो । जुन क्रिकेटमा कहिल्यै संभव हुँदैन । जसले दक्षिण अफ्रिकालाई जोकर बनाउन थप पर्‍याप्त भयो ।
१९९६ को सेमिफाइनलमा भारत र श्रीलंका भिडेका थिए । भारतका खेलाडीहरु लगातार आउट हुँदा सचिन तेन्दुलकर क्रिजमा डटेका थिए ।उनी पनि ६५ रन बनाएर पेभेलियन फर्किए । भारतको पारी ३४ ओभरको खेल चल्दा २ विकेट मात्रै बाँकी थियो । त्यसपछि इडन गार्डेनमा खेल हेर्न पुगेका भारतीय दर्शकले बोटल फाल्न सुरु गरे भने सिट पनि निकालेर फाल्न खोजेका थिए । त्यसपछि खेल नै रोक्नु परेको थियो भने खेल सकिनु अगावै श्रीलंकालाई विजेता घोषणा गरिएको थियो । १९९९ मा भएको विश्वकप पनि विवादित बन्यो । भारतविरुद्धको खेलमा हेन्सी केन्येले इरफोनमा पाकिस्तानका कोच बब बुल्मरसँग कुरा गरेको भेटिएपछि भारतीय कप्तान सौरभ गांगुलीले अम्पायर लाई सूचीत गरेका थिए । जसका कारण क्रोन्येले इयरफोन निकाल्न परेको थियो । प्रतियोगिताका दौरान अरु कुनैसँग कुरा गर्नु खेल भावना विपरित पनि हो । २००७ को विश्वकपका बेला इंग्ल्याण्डका उप कप्तान थिए एन्ड्रयू फिलिपटफ । उनी रक्सी खाएर हल्लिएको अवस्थामा फेला परेका थिए । त्यतिबेला उनी बोटबाट पनि खसेका थिए । जसका कारण उनले उप कप्तानबाट राजीनामा दिनु परेको थियो ।
यस्तो गर्दै महेन्द्रसिंह धोनी..